ओलीको जवाफ सल्लाहकारबाट
काठमाडौं । आफूविरुद्ध षडयन्त्र गरेको चाल पाएपछि प्रधानमन्त्रीले प्रेस सल्लाहकारका मुखबाट जवाफ फर्काउन थालेका छन् । सल्लाहकार छन्– सूर्य थापा । थापाले भनेका छन्– क्यान्टोनमेन्टको मुद्दा अख्तियारमा छ कि छैन ? यो मुद्दा किन अघि बढेन ? क्यान्टोनमेन्टको मुद्दा भनेको लडाकालाई दिएको राज्यको ढुकुटी प्रचण्डले खाएको आरोप हो । यसको अर्थ ओली र प्रचण्डमा छायाँयुद्ध सुरु भएछ । यता कांग्रेस सभापति देउवाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भयो, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न किन ढिलो गरेको भनेर प्रश्न उठाएपछि तिनै सूई थापाले ओठे जवाफ दिएका छन्– छानबिनको सुरुआत देउवाबाटै गर्नुपर्छ । वाइवडी, न्यारोवडीदेखि लिएर धेरै बडीहरुमा संलग्न शेरबहादुर देउवाजी नै हो भन्ने कुरा सार्वजनिक नै छ, ललितानिवासदेखि धेरैवटा भ्रष्टाचारका मुद्दामा उहाँ बोल्नुभएको छैन । थापाले भनेका छन्– प्रकाशशरणले ईश्वर पोखरेलको राजीनामा माँग्ने ? १० हजार भोटले हारेका महतसँग छ हैसियत ?
सांसद विकास कोष कता छ ?
काठमाडौं । सांसद विकास कोष सांसदको पकेट खर्च हो कि जनताका अपेक्षा संवोधन गर्न छुट्याइएको हो ? जनअपेक्षाकै लागि हो भने कोरोनाको कहरमा जनता छटपटिने काम भइरहेको छ, कोरोनासँग लड्न सरकारले चन्दा कोष स्थापना गरेको छ । सबैले कोरोनासँग लड्न यथासख्य आर्थिक सहयोग दिइरहेका छन् । सांसदहरु कता छन् ? किन जनताका साथमा छैनन् ? जनप्रतिनिधिहरुका लागि सांसदकोषको उपयोग किन भइरहेको छैन ?
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १४ शिर्षकमा एक खर्ब बजेट कटौती गरेर कोरोनाका लागि रकम खर्च गर्ने चाँजो मिलाएका छन् । यति गर्नसक्ने अर्थमन्त्रीले सांसद विकास कोष किन चलाएनन् ? खबर छ, केही नेकपाकै सांसदहरुले खबरदार गरेपछि प्रधानमन्त्रीको विरोध बढी होला भनेर अर्थमन्त्री पछि हटेका रहेछन् ।
पक्का भयो, सांसद विकास कोष सांसदहरुको कागज मिलाएर खाने पकेट खर्च नै रहेछ । सांसद आआफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने र सांसद विकास कोषलाई उपयोग गर्ने हो भने यो महामारी र पेटको हाहाकार दुबैतिर राम्रो बन्दोबस्त हुनसक्ने रहेछ । तर सांसदहरु जनताप्रति जिम्मेवार छैनन् भन्ने यो अर्को उदाहरण देखिएको छ । अर्थकै कर्मचारी भन्दै थिए– सबै सांसदको सहमति कोष नचलाउने मै छ ।